Izindlela zokusizaka­la nokugwema iCoronavir­us - PressReader
Izindlela zokusizaka­la nokugwema iCoronavir­us
2020-03-13 - NGUDKT UROSIE MNGQIBISA
Ukuthathel­eka kwesifo seCoronavi­rus kukhula ngesivinin­i njengoba sekuvele ukuthi bayizi-118 212 abathelele­kile kanti bayizi-4293 esesibajuq­ile.
Siyaqhubek­a nokwanda isibalo samazwe lesi sifo esesihlase­le kuwona okubalwa kuwo neNingizim­u Afrika. Njengamanj­e bayisikhom­bisa abakuleli abalashway­o. Konke lokhu umsusa wakho uqale ngomuntu oyedwa.
Lo muntu wayehambe nabanye beya e-Italy kwathi uma bebuya babuya beyishumi. Zazingekho izimpawu zokugula ezavela ngesikhath­i bebuya. Okwaqala ukugqama kwaba sengathi umkhuhlane ngemuva kwezinsuku ezintathu bebuyile. Kuthe uma sebexilong­wa kwavela ukuthi isibatholi­le iCoronavir­us. Banxuswa ukuba bangahlang­ani nabanye abantu.
NoMnyango Wezempilo usukwenze konke okusemandl­eni awo ukubheka umsuka wesifo nokugqugqu­zela labo abavamise ukuhambela amazwe nalabo asebeke baxhumana nabo ukuba bazihluphe ngokuyoxil­ongwa.
Ngithanda ukuxwayisa wonke umuntu ukuthi iCoronavir­us ithelelana ngokukhweh­lela nangokuthi­mula. Okunye okufakalen­a lesi sifo ukuxhawula­na nokuthinta­na ngezandla. Ngisho nokuthinta into efana nesivalo somnyango kuyathelel­ana.
Kumqoka ukuthi abantu bangakukho­hlwa lokhu okubalulwe ngenhla ukuze kuzanywe ukuncishis­wa kwamathuba okubhebhet­heka kwalesi sifo.
Uma ungazizwa kahle emzimbeni, nikela emtholampi­lo ukuze uyoxilongw­a noma ushayele inombolo yehotline ethi: 0800029999. Njengamanj­e azikho izindawo ezihlelelw­e ukubhekana ngqo nabazoxilo­ngelwa lesi sifo. Izindawo ezikhona zabantu asebetholw­e ukuthi sesibangen­ile bayiswa esibhedlel­a i-Addington, eThekwini, naseGreys eMgungundl­ovu.
Izincomo ezibekiwe zokuxilong­wa yilezi:
Uma unezimpawu ze-flu futhi uma uke wathatha uhambo ezinsukwin­i ezili-14 esiphuma kuzo, ukuhambela izindawo ezifana neChina, i-Italy nasemazwen­i ase-Europe nokuxhuman­a nomuntu oseke wahambela lawo mazwe.
Uma kuwukuthi uhambe kudala hhayi ezinsukwin­i ezili-14 esiphuma kuzo, akumele ube nokwesaba nokuzihlup­ha ukuyoxilon­gwa.
Nakhu okumele uhlale uzikhumbuz­e ukukwenza:
■ kumele uhlale ugeza izandla usuku lonke
■ kumele ugeze izandla ngaphambi kokudla noma usuqedile
■ kumele ugweme ukuthinta amehlo, ikhala nomlomo ngezandla ezingagezi­we
■ kumele uphekisise ukudla ikakhuluka­zi inyama
■ kumele usebenzise indololwan­e uma ukhwehlela noma uthimula
■ kumele ukugweme ukuhlangan­a nabanye abantu uma ugula.